यहोवाका साक्षीहरू येशूलाई विश्वास गर्छन्‌? | कुराकानी
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको ईवी उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन माया मालागासी माल्टिज मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
एक जना यहोवाको साक्षी र छिमेकीबीच हुन सक्ने कुराकानी तल दिइएको छ। अनुज भन्ने मान्छेसित शरद नाम गरेका साक्षी भाइले यो कुराकानी गरिरहेको कल्पना गरौं।
येशूलाई विश्वास गर्नु अत्यावश्यक
शरद: नमस्ते अनुजजी। धेरै दिनपछि भेट भयो त।
अनुज: ए शरदजी, नमस्कार!
शरद: तपाईंलाई भनेर यो नयाँ प्रहरीधरहरा र ब्यूँझनुहोस् ल्याइदिएको थिएँ। यसपालि एकदमै राम्रो लेख आएको छ।
अनुज: ए हो, धन्यवाद छ है। तपाईं आउनुभयो बेस भयो। एउटा कुरा सोध्नु थियो।
शरद: के हो, भन्नुस् न।
अनुज: अस्ति मैले अफिसको साथीलाई तपाईंहरूको पत्रिका दिएको थिएँ। ऊ पनि ख्रीष्टियन हो, चर्च जान्छ। उसलाई पत्रिकाको राम्रो लेखहरूबारे पनि बताएको थिएँ। तर उसले त मलाई ‘यहोवाको साक्षीहरू येशूलाई विश्वासै गर्दैनन्‌, त्यस्तो पत्रिका पढ्नु हुँदैन’ पो भन्यो। यसबारे तपाईंलाई सोध्छु भनेर मैले साथीलाई भनिदिएँ। तपाईंहरू साँच्चै येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्न?
शरद: मलाई धेरै खुसी लाग्यो। तपाईंले यस विषयमा अरू कसैलाई सोध्नुभएको भए अनेक थरी जवाफ पाउनुहुन्थ्यो होला।
अनुज: त्यही भएर तपाईंसँग कुरा गर्ने विचार गरेको।
शरद: अनुजजी, यहोवाका साक्षीहरू येशूमा विश्वास गर्छन्‌ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। अझ भन्ने हो भने उद्धार पाउन येशूलाई विश्वास नगरी हुँदैन।
अनुज: मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो तर साथीले तपाईंहरू येशूमा विश्वास गर्नुहुन्न भनेपछि अलि खुलदुली लाग्यो। यस विषयमा तपाईंसित मेरो कहिल्यै कुरा भएको जस्तो लाग्दैन।
शरद: येशूमा किन विश्वास गर्नुपर्छ भन्नेबारे बाइबलमा के बताइएको छ, तपाईंलाई देखाऊँ? हामी यी पदहरू प्रायजसो घरघरको प्रचारमा चलाउँछौं।
अनुज: हुन्छ, हेरौं न।
शरद: येशूले आफ्नो एक जना चेलासित कुरा गर्दै गर्दा के भन्नुभयो, यूहन्ना १४:६ हेर्नुहोस् त। “येशूले तिनलाई भन्नुभयो: ‘बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ। मबाहेक अरू कसैद्वारा कोही पनि बुबाकहाँ जान सक्दैन।’” यसमा कोद्वारा मात्र बुबाकहाँ पुग्न सकिन्छ भनेको छ?
शरद: ठीक भन्नुभयो। हामी यहोवाका साक्षीहरू यो कुरामा पूरा विश्वास गर्छौं। त्यति मात्र होइन, जुनसुकै प्रार्थना पनि हामी येशूको नाममा गर्छौं।
अनुज: ए, कुरा त्यसो पो।
शरद: हामी अर्को शास्त्रपद पनि हेरौं। त्योचाहिं यूहन्ना ३:१६। येशूको जीवनी अनि प्रचारकार्यबारे बाइबलमा चारवटा किताब लेखिएको छ। त्यो चारवटा किताबले दिन खोजेको सन्देशलाई सारांशमा यस पदमा बताइएको छ। तपाईं यो पढिदिनुहुन्छ?
अनुज: हुन्छ। “किनकि परमेश्वरले संसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो, ताकि ऊमाथि विश्वास गर्ने हरेक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्।”
शरद: धन्यवाद। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको प्रेमले गर्दा मानिसजातिले अनन्त जीवन पाउन सम्भव भयो भनेर बताइएको छ। तर त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनिएको छ?
अनुज: विश्वास गर्नुपऱ्यो।
शरद: हो। विशेषगरि एक मात्र छोरा येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँलाई विश्वास गऱ्यौं भने हामीले अनन्त जीवन पाउन सक्छौं भन्ने विषयमा प्रहरीधरहरा पत्रिकाको पृष्ठ २ मा बताइएको छ। यस पत्रिकाको उद्देश्यबारे यहाँ यस्तो लेखिएको छ, हेर्नुहोस् त। “हामीले अनन्त जीवन पाउन सकोस् भनी आफ्नो जीवन दिनुहुने येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास राख्न यसले प्रोत्साहित गर्छ, तिनै येशू जसले अहिले परमेश्वरको राज्यको राजाको रूपमा शासन गरिरहनुभएको छ।”
अनुज: ए, यहोवाका साक्षीहरू येशूलाई विश्वास गर्छन्‌ भन्ने कुरा त तपाईंहरूकै पत्रिकामा छर्लङ्गै पारेको रहेछ त।
शरद: हो नि।
अनुज: अनि त्यसोभए मान्छेहरू किन तपाईंहरू येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्न भन्छन्‌ त?
शरद: त्यसको विभिन्न कारण हुन सक्छन्‌। जस्तै, कोही-कोहीचाहिं अरूले जे भन्यो, त्यसैमा हो मा हो मिलाउने गर्छन्‌। अनि अरू कति भने तिनीहरूको धर्मगुरुले नै त्यस्तो सिकाएकोले त्यसो भन्ने गर्छन्‌।
अनुज: मेरो विचारमा तपाईंहरू आफूलाई येशूको साक्षी होइन, यहोवाको साक्षी भन्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईंहरू येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्न भनेको हो कि?
शरद: त्यो पनि हुन सक्छ।
अनुज: तपाईंहरू किन धेरैजसो यहोवाको विषयमा मात्र कुरा गर्नुहुन्छ?
“मैले तिनीहरूलाई तपाईंको नाम प्रकट गरेको छु”
शरद: त्यसको एउटा कारण, हामी परमेश्वरको नाम प्रयोग गर्नुलाई येशूले जस्तै महत्त्वपूर्ण ठान्छौं। येशूले आफ्नो बुबालाई प्रार्थना गर्दा भन्नुभएको कुरा विचार गरौं न। यहाँ यूहन्ना १७:२६ मा के लेखिएको छ, एक चोटि पढ्नुहोस् त।
अनुज: “मैले तिनीहरूलाई तपाईंको नाम प्रकट गरेको छु र प्रकट गर्नेछु, ताकि तपाईंले मलाई प्रेम गर्नुभएजस्तै तिनीहरूले पनि प्रेम गरून्‌ र म तिनीहरूसित एकतामा हुन सकूँ।”
शरद: धन्यवाद। तपाईंले याद गर्नुभयो होला, येशूले परमेश्वरको नाम प्रकट गर्नुभयो। उहाँले किन त्यसो गर्नुभयो होला?
अनुज: अम् . . . खै थाह भएन।
उद्धार पाउन येशूलाई विश्वास गर्नै पर्छ
शरद: त्यसोभए यो कुरा बुझ्न म तपाईंलाई अर्को बाइबल पद देखाउँछु। त्योचाहिं प्रेषित २:२१ हो। यहाँ यस्तो लेखिएको छ: “हरेक जसले यहोवाको नाम पुकार्छ, उसले उद्धार पाउनेछ।” तपाईंलाई कस्तो लाग्छ, उद्धार पाउनको लागि यहोवाको नाम पुकार्नुपर्छ भन्ने कुरा के येशूलाई थाह थिएन होला र?
अनुज: थाह थियो होला।
शरद: हो, येशू आफ्ना चेलाहरूले परमेश्वरलाई चिनेको अनि उहाँको नाम प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ। यसको एउटा कारण तिनीहरूले उद्धार पाऊन्‌ भनेर हो। अनि हामीले यहोवाको विषयमा धेरै कुरा गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। हामी परमेश्वरको नाम अरूलाई प्रकट गर्छौं ताकि तिनीहरूले पनि यहोवाको नाम पुकार्न सकून्‌।
अनुज: तर कुरै परमेश्वरको विषयमा भइरहेको छ भने किन नामै लिनुपऱ्यो र?
शरद: त्यो त हो। तैपनि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो नाम थाह दिएर उहाँसित नजिक हुन अझै सजिलो बनाइदिनुभएको छ।
शरद: उदाहरणको लागि मोशा भन्ने परमेश्वरको एक जना सेवकलाई विचार गरौं। तिनले लाल समुद्र दुई भाग पारे। अनि परमेश्वरले तिनलाई दस आज्ञा दिनुभएको थियो। तिनको कामैले मात्र पनि तिनलाई चिन्न सकिन्थ्यो। त्यसैगरि नूह नाम गरेका बाइबल पात्रले ठूलो जहाज बनाएर आफ्नो परिवार र जीवजन्तु बचाए। तिनलाई पनि कामैले चिन्न सकिन्थ्यो। अनि येशू ख्रीष्टलाई पनि स्वर्गबाट आएर हाम्रो पापको लागि ज्यान दिने मानिस भनेर चिन्न सकिन्थ्यो। यसो हेर्दा कसैलाई चिन्नको लागि नामै प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतै देखिंदैन नि, होइन र?
अनुज: हो, मैले पनि त्यही भनेको।
शरद: तर परमेश्वरले हामीलाई तिनीहरूको नाम थाह दिनुभएको छ। तिनीहरूको नाम थाह भएकोले तिनीहरूको जीवनी हामीलाई काल्पनिक कथाजस्तो लाग्दैन। मोशा, नूह अथवा येशूजस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै नभेटेको भए तापनि हामीलाई तिनीहरू वास्तविक लाग्छ।
अनुज: त्यही त है, मैले त यसरी सोचेकै थिइनँ।
शरद: हो, त्यही भएर त यहोवाका साक्षीहरू परमेश्वरको नाम यति धेरै प्रयोग गर्छन्‌ नि। मानिसहरूले यहोवा परमेश्वरलाई वास्तविक व्यक्तिको रूपमा विश्वास गरेको अनि उहाँसित घनिष्ठ भएको हामी चाहन्छौं। साथै हाम्रो उद्धारको लागि येशूले कस्तो भूमिका निभाउनुभएको छ भनेर पनि मानिसहरूलाई बुझाउन चाहन्छौं। यो कुरा बुझ्न तपाईंलाई फेरि एउटा बाइबल पद देखाउँछु, है।
शरद: अघि हामीले यूहन्ना १४:६ मा येशू नै “बाटो, सत्य र जीवन” हुनुहुन्छ भनेर बुझ्यौं। यसै पदको अलि माथि यूहन्ना १४:१ को दोस्रो भागमा उहाँले के भन्नुभएको छ, तपाईं पढिदिनुहुन्छ कि?
अनुज: हुन्छ। “परमेश्वरमाथि विश्वास गर, अनि ममाथि पनि विश्वास गर।”
शरद: धन्यवाद। के यसको मतलब हामीले येशू अनि यहोवामध्ये जसलाई विश्वास गरे पनि हुन्छ भन्न खोजेको हो?
अनुज: होइन। येशूले दुवैलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुभयो।
शरद: ठीक भन्नुभयो। ‘म परमेश्वरलाई अनि येशूलाई विश्वास गर्छु’ भन्नु मात्र पर्याप्त छैन। हामीले विश्वास गरेअनुसार जीवन पनि बिताउनुपर्छ।
अनुज: त्यो त गर्नै पर्छ नि।
शरद: तर हामी परमेश्वर र येशूलाई साँच्चै विश्वास गर्छौं भनेर कसरी देखाउन सक्छौं? यस विषयमा तपाईंसँग अर्को पटक कुरा गरौंला। *
अनुज: भइहाल्छ नि।
तपाईंलाई छलफल गर्न मन लागेको कुनै बाइबल विषय छ? यहोवाका साक्षीहरूको कुनै विश्वास वा गतिविधिबारे तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि? यदि त्यसो हो भने कुनै एक जना यहोवाका साक्षीलाई सोध्न नहिचकिचाउनुहोस्। यस्ता विषयहरूमा तपाईंसित छलफल गर्न तिनीहरू खुसी हुनेछन्‌।
^ अनु. 56 थप जानकारीको लागि यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? भन्ने यस किताबको अध्याय १२ हेर्नुहोस्।